Nzira 10 Dzokuwedzera Ekutengeserana Kwako Kutengesa Zvakaitwa Ne Semalt
Kutaura zvazviri, eCommerce vashandi vebhizimisi vari kuita mari yakawandakubva pane zvakagadzirwa. Kuongorora kwechangobva kuitwa na Statist kwakaratidza kuti eCommerce yekutsvaga kutengesa munyika yoseichasvika ku 2.86 trillion US dollars muna 2018. Nhamo, hausi kungovaka eCommercechivigiro uye vanotarisira kuti vatengi vakuza nzvimbo yako. Iwe uchada kutanga kutanga kubudirira kwemakambani ekutsvagakuitira kuti vatengesi vafarire.
Nhau dzakanaka ndeyokuti nenzira idzi dzinotevera dzekutengesa dzakaratidzwa neSemalt Digital Services iwekuwedzera yako eCommerce sales. Ivan Konovalov, Mutungamiri Wekubudirira Kwekambani we Semalt , anopa mazano anokoshapane maitiro api eCommerce anochengetedzwa anofanira kuchengetwa kuitira kuti abudirire.
1. Shandisa Up-Kutengesa uye Kutengesa-Kutengesa
Kudenga-kutengesa uye kutengesa-kutengesa inzira dzechokwadi-dzomoto dzaungashandisa kuwedzera kutengesa kwepaIndaneti. Kutengesa pamuchinjikwandiyo nzira yekutumira zvinhu zvakabatana pamwe chete nezvinodiwa nevatengi vachifunga kutenga. Inopa amutengi kune zvakawanda zvekugadzirisa zvinhu zvingasarudzwa kubva. Kudenga-kutengesa chiito chekutengesa kune akakwirirashanduro yegadzirwa iyo mutengi ari kutenga. Iyi nzira inobvumira mutengi wako kuti aone chinhu chimwe chetenepamusoro zvakasikwa uye mutengo wakakwirira.
Aya maitiro ekutengesa akagadzirirwa kukurudzira vatengi kutenga dzimwe mishonga. Chokwadi ndechekuti kanavatengi vanoona zvinopfuura izvo zvavanoda, ivo vachakurudzirwa kutenga zvakawanda. Ongororo dzakawanda dzakaratidzwakuti-kutengesa uye kutengesa kutengesa kunokurudzira vatengi kuti vadzoke zvakare.
2. Kuvandudza Yenyu Website Yakagadzirwa
Muzera remajeri remazuva ano, unoda chimiro chekushandura webhusaiti kukwezva nekubatana nevatengi. YakoeCommerce store ndiyo chikamu chekambani, uye iyo yakagadzirwa inofanirwa kuratidza kuti unyanzvi hupi hunonzi brand yako.Kutaura zvazviri, mishandirapamwe yako yekutsvaga inofanira kutanga kubva muchitoro chako zvakare. Nyanzvi dzeSimalt dzakazaruraichocho chokuti vatengi vanowanzotora nzvimbo yekutsvaga paIndaneti kana isina kukodzera kushandiswa.
Kuvaka rakagadzirirwa eCommerce store ndiro danho rinokosha pakukunda vanokwikwidzana. Kana iwe urikuronga kugadzirisazve dare rako, ezvo ita nechokwadi kuti ine chigadziro chinogamuchirwa, chinopa vatengi aanoshamisira kutenga zvidzidzo. Zvechokwadi, iwe unotyaira kutengesa kwepamusoro apo iwe unoita kuti zvive nyore kuvanhudzoka uye uwane zvigadzirwa pawebsite.
3. Ita Kuti Site Yako Ive Nemafoni Ishamwari
Mumakore mashomanana apfuura, mahwendefa matsva uye mafoni emafoni ave achiuya mumusika.zvakanyanya kuwedzera nhamba yevashambadziri vepaIndaneti. Zvidzidzo zvinoratidza kuti nhamba yevashambadziri vezvitoroyakapfuura iyo yebasa rekushandisa. Muzera iri rejedi, kuita eCommerce yako dare yakagadzirirwa zvakakwanakune zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvefoni zvinokosha chikamu chebhizimisi rako kubudirira.
Kunyange Google inowedzera kushandiswa kwemafaira ekutsvaga kwemawebsite anoratidza zvakakodzera pane zvigadzirwa zvefoni.Kuumba shanduro yefaira yako yezvino yepawebsite yepaiti iwe unogona kushandisa kutendeuka kwepuraneti kana kushambadziraplugins. Kugadzira kambani yeCommerce store yeushamwari ndiyo nzira yakanaka yaungashandisa kuzarura bhizinesi rakokune vashambadziri. Uine mafaira ekufambisa kwechitoro, iwe uchawedzera kuchinja kwehuwandu uye kuwedzera kutengesa.
4. Shandisa Mifananidzo yeZvakanaka
Usashandisa chero chigadzirwa chemufananidzo chete nekuda kwekuwedzera mifananidzo. Zvigadzirwa zvako 'zvifananidzo zvinofanira kuvaa high quality. Ichokwadi kuti kuwana zvigadzirwa zvemhizha zvinogona kuva basa rinotyisa, asiIchokwadi zvakare kuti vanogona kubatsira kukwezva vangave vatengi kuchitoro chako. Nyanzvi dzedu dzakaratidza vazhinjidzimwe nguva iyo kuwedzera mifananidzo yakajeka yemifananidzo nekushamba-ma-sarudzo inokurudzira vatengi vanogona kutenga chigadzirwa.
5. Optimize Product Page Tsanangudzo
Tsanangudzo yako peji yezvigadzirwa zvinogona kukwezva vatengi kuti vatenge. Iva nechokwadi chokutiiwe wakatsanangura zvinhu zvinobatsira zvinoita kuti vatengi vafarire. Ramba uchivakurudzira ivo mberithe funnel. Most popular eCommerce sites like Amazon inoratidza maitiro makuru ezvigadzirwa zvavanoita kuti vavandudze kutengesa.
Tsananguro inofanirwa kunyatsorondedzerwa kuitira kuti chero ipi zvayo inogona kuwanikwa nevatengi vanoiverenga ichakurudzirwakuti atore chiito. Iwe unogona kushandisa zvigadzirwa zviduku zvakanakisa kuti uratidze maitiro makuru echigadzirwa. Hapana fungidzirokuti iwe uchange uchitadza pane zvakawanda zvekutengesa kana mashoko aunofanirwa kukukurudzira iwevatengi vanogadzira kutenga vanovanzwa mune tsanangudzo.
6. Gadzira Short Promotional Products Videos
Mushandirapamwe wevhidhiyo inzira inokosha yekutsvaga yeCommerce store dzakawanda, inoshandiswa kuitirakuwedzera kutengesa. Vatengi vemazuva ano vanoshandiswa nevashambadzi vanosarudza kutarisa mavhidhiyo kupfuura mamwe maitiroyezviri mukati. Gadzira mavhidhiyo mafupi ekutsvaga mavhidhiyo emiti yako, sanganisira zvakakoshazvikamu zvezvigadzirwa zvako zvinogona kutora vatengi. Gadzira mavhidhiyo aya muzvikwata zvakasiyana-siyana zvemapeji ewebhu.
Unogonawo kuisa mavhidhiyo emiti kumiti yose yakakurumbira yemavhidhiyo kuti uwedzere kuiswa. Usaitikukanganwa kugadzirisa mavhidhiyo ako e SEO nekuwedzera mazwi ehurukuro yevhidhiyo uye tsanangudzo. Iweinogona kuwedzera yako keroti yekeroti semashoko mumatsanangudzo ekufambisa motokari zvakare.
7. Gadzira Chimwe Chinokosha Chimiro
Izvo zvakasiyana-siyana zviripo eCommerce munda zvinokuomera zvakaoma makambanikuzvitsaura ivo pachavo kubva kumakwikwi. Hazvina mhosva kuti iwe unofungidzira sei zvigadzirwa zvakoNdiko, pane imwe imwe shopu kunze uko, iyo iri kupa zvakafanana kana zvakafananazvigadzirwa kumusika wako. Kana zvakadaro, chii chaungaita kuti uite marashi yakokumira kunze kwezviuru zvemamwe zvimwe mabhii? Chinhu chakasiyana-siyana chakanaka chinonzi chiiichaita kuti brand yako ive yakakosha. Unofanirwa kunyorera chakanaka chakanaka chinokurudzira chinoshandiswakukosha kwako chigadzirwa chako. Kuzvipa, iwe uchapfuura mukukwikwidza, uye uchanakidzwa nezvibereko zveutungamiriri.
Chimwe chinhu chakasiyana-siyana chinogona kugadziriswa chinogona kubatanidzwa pane peji rako, peji yezvigadzirwa, uye kushambadzirapeji kuti kuwedzere kutendeuka mazinga. Kuva neruzivo rwechii chinoratidza mararamiro ako kubva kune mamwemarikisi achakubatsira iwe kumhanya bhizimisi reCommerce rakabudirira. Iyi nzira inogona kukubatsira kuparadzanisa iwe kubva kumakwikwi ako.
8. Kupa Zvipfeko Zvitsva uye Zviri nyore
Iyi nzira yekutsvaga inogona kukurudzira vashandi vanogona kutenga kubva kwamuri uye kuvandudza kutengeserana kwekutsvaga.Kushandurwa kwemichina yakashandura kwakabatsira vakawanda eCommerce brand kuti vawane kuvimbika kwevatengi uye vanoita kuti vave nechido chokudzoka kune zvimwe.
Kutengesa zvekutsvaga paIndaneti kunowanikwa muCommerce bhizinesi, uye vatengi vachadzoka mishongavakatenga nguva nenguva. Mutengi wako anokwanisa kusarudza kudzorera chigadzirwa chakanga chaparadzwakana kuti haana kukodzera zvakanaka. Machenda anodzoka kubva kune chimwe chezvinhu zvitatu. Chaizvoizvo, iyovazhinji vevashambadziri vanoongorora mutemo wokudzoka vasati vatenga.
Kana vanogona kutenga vatengi vanoziva kuti vanogona kudzorera zvinhu zvakasununguka, zvinowanzoitikadzoka zvakare. Chidzidzo chakaitwa neWall Street Journal chakatsigira kuti zvakanakisisavatengi ndevaya vane zvikwereti zvakakwirira zvakadzoka. Kushandiswa kwemutemo uyu mukati makokudzidzira kuchakubatsira kuti usarega kushambadzira kukuru uye mikana yebhizimisi.
9. Ratidza Zvimwe Zvinyorwa Pamusoro Peimba Yako Page
Peji rako rekumba ndeimwe yezvinhu zvakakosha zveCommerce website yako kuitira kuti iwe uiteshandisa iyo kuchengeta vatengi vanobatanidzwa. Kuratidza zvinhu zvakanakisa-kutengesa zvigadzirwa kuitira kuti vashandi vanogonavanogona kuzviona zvakajeka. Zviri nyore kuti chero shopper inouya kuCommerce yako storekuburikidza nemamwe mapeji vanogona kusarudza kushanyira peji yepamusha kuti vaone dzimwe mishonga. Saka, kuisa yakoZviwanikwa zvakakurumbira pane peji yepamusoro zvinowedzera kuwedzera kutengesa.
10. Ipa Multiple Delivery Options
Kupa vatengi vane maitiro akawanda ekutora zvinokurudzira kutengesa kwako. Zvinoshamisa,asi mabhizimisi anotengesa zvigadzirwa zvepamusoro anopa ruzivo rwakawanda rwepakombiyuta chaizvokazhinji zvinokundikana kana zvasvika pakusununguka. Kana uchida kukurudzira vatengi kutenga kubvaiwe, saka iva wakagadzirira kupa maitiro akawanda ekutumira. Nzira yakakosha yekutengesazviri nyore kuita, asi zvinokubatsira kuti urege kusunungura vatengi vese uye uvaendese kuenda kumakwikwi ako.
Zviri pachena kuti Indaneti yakashandura nzira iyo vanhu vanotsvaga uye vanotenga michina. IzviMazuva ane desktop kana foni yedzimba iwe unogona kutenga chero chaunoda paIndaneti. Vanhu varivachiramba vachida kupinda muCommerce bhizinesi. Kuchengetedza nekukwira kwekumukaKuzivikanwa kwekutengesa kwepaIndaneti, unogamuchirwa kutaura kune rubatsiro rwemhizha rwakapiwa ne Semalt Digital Services Source .